အရိပ်ချစ်: January 2013
အိမ်နီးချင်း မိသားစု တစ်ခုမှာ အခင်မင်ရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း လင်းထိန် အမည်ရ လူငယ် တစ်ဦး ရှိပါတယ်။ နေထိုင်တာက နယ်မြို့ လေး တစ်ခုဆိုတော့ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သိပ်မရှိပါဘူး။ လင်းထိန် က စာတော်ပါတယ်။ စာတော်ဆိုလို့ စာမှာ အမှတ်ပြည့်ရသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အတန်းဆရာတွေဆီမှာရော၊ အပြင်မှာရော ကျူရှင် မတတ်နိုင်တော့ သူတော်တယ်ဆိုတာ အတန်းထဲမှာ အလယ်အလတ်လောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတောင် သူ့မှာ စာကျက်ချိန် လုံလုံလောက်လောက် မရှိပါဘူး။ အိမ်က ဈေးထဲမှာ လက်ဘက်ခြောက်ရောင်း တော့ ကျောင်းအားတဲ့အချိန်ဆို စာအုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဆိုင်သွားစောင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် တော်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းစာ အမှတ်ကိုပဲ ကြည့်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်တွေ စာအားရပါးရကျက်နေချိန် သူက အလုပ်လုပ်နေပြီး စာမေးပွဲနီးမှ ကောက်ကျက်တယ်၊ တွက်တယ်၊ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူငယ်တန်းကနေ ၈ တန်းအထိ နယ်ကျောင်းမှာ အတူတူတက်ခဲ့ကြတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ စာရေးသူလည်း ရန်ကုန်ပြောင်းပြီး ကျောင်းတက်ပါတယ်။ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးတွေ ဖြစ်နေတော့ သံယောဇဉ်သိပ်မထားပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဘယ်အချိန်တွေ့တွေ့ အရင်လို ခင်မင်မှု မပြတ်ဘူးဆိုတာ ရင်ထဲထိ သိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ စာရေးသူ ဘွဲ့ရ ကျောင်းပြီးတော့ နယ်ကို အလည်ပန်ပါတယ်။ အလည်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ သူနဲ့တွေ့ပါတယ်။
သူကတော့ ဈေးထဲမှာ လက်ဘက်ခြောက်ရောင်းနေတုန်းပါပဲ….
သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်တော့ ဆိုင်စောသိမ်းလို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် ကြောင်းစုံ မေးကြည့်တဲ့အခါ..
“င့ါညီမကို ဘော်ဒါဆောင်ထားဖို့ ကွာ၊ နီးစပ်ရာမြို့ တွေက ဈေးအထိတောင် သွားရောင်းနေရတယ်”
သူက ဥာဏ်ကောင်း တယ်။ စကားပြောပြေပြစ်တယ်။ ဒီတော့ သူ့လက်ဘက်ခြောက်ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်ဘဝ ကတော့ နယ်မြို့ ငယ်လေးမှာ သာမန်လူလတ်တန်းစား တစ်ဦးလိုပါပဲ။
ဒီမှာ အဖြေရှာကြည့်ပါတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းသော်ငြားလည်း သူဘာလို့ ဒီအခြေအနေက ရုန်မထွက်နိုင်ရတာလဲ။ သူ့လို ဘဝဆုံးနေသူများကော ယင်းအခြေအနေက ရုံးထွက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။
၁။ ကံကို ယုံပါ။ သို့သော် ပုံမချပါနဲ့။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်ကံ တစ်ခု ကောင်းလာဖို့ ဥာဏ်နဲ့ အားဆိုက်ပါ။
၂။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဘဝမှာ ကိုယ့်ထက် အခြေအနေဆိုးသူများ ရှိနေပါတယ်။ အပေါ်ကိုကြည့်လို့ မုဒိတာပွား အားကျ အတုယူပါ၊ အောက်ကို ကြည့်လို ကရုဏာဝင် ဥာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်ပါ။
၃။ ရောင့်ရဲပါ။ သို့သော် မပျင်းပါနဲ့။ ရောင့်ရဲသည်ဟုသော အကြောင်းပြ ချက်ဖြင့် ဘဝတက်လမ်း အတွက် ကြိုးစားနေမှုကို မရပ်တန့်ပါနှင့်။
၄။ ပညာ သင်ပါ။ မရပ်တန့်ပါနှင့်။ ပညာသင်ကြားမှု ရပ်တန့်သည့်အချိန်က မိမိတန်ဖိုး တက်နေခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းနှင့်တူပါတယ်။
၅။ ကြိုးစားပါ။ ဇွဲ့မလျော့ပါနှင့်။ ဇွဲလျော့လိုက်သည့်အချိန်က ကျရှုံးမည့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းခြင်းနဲ့ တူပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ နေမှ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ နေမှမဟုတ်ပါ။ ဘွဲ့ရမှမဟုတ်ပါ။ ကံ၊ဥာဏ်၊ ဝီရိယ အားဆိုက်လို့ ဘယ် အလုပ်လုပ်လုပ် သူ့နေရာနဲ့ သူ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ထိုက်သင့်သလို ရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူရဲ့  မိတ်ဆွေလင်းထိန်းဟာ ၁၀ တန်းအောင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ပါဘူး။ ဘဝကျောင်းမှာ လည်း ဆက်လက် သင်ကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ အကယ်၍ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်လို့၊ ဘဝပညာ သင်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အချိန်ပေးလေ့လာလိုက်စားရင် သူဒီအချိန်မှာ လက်ဘက်ခြောက် ဈေးသည် မဟုတ်ပဲ ပွဲရုံတစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ ဥာဏ်ကောင်းပေမယ့် သူကောင်းတဲ့ ဥာဏ်က ဘောင်ကျဉ်းသွားပါတယ်။ ဘောင်ကျယ်ကျယ် တွေးတတ်၊ ဥာဏ်ကောင်းဖို့ဆိုတာ ဘောင်ကျယ်ကျယ် လေ့လာသင်ယူမှ ရတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီတော့ စာဖတ်သူတို့ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘဝဆုံးပြီလို့ထင်နေ သူတွေ၊ အောင်မြင်မှု မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်နေသူများအနေနဲ့ ဒီဥပမာကို ယူလို့ မိမိဘဝမှာ လက်တွေ့အသုံးချသွားနိုင် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 05:27 No comments:
ရတာပါလိမ့်” ဟု ငြီးတွားသည်။
Posted by Ayeit Chit at 17:00 No comments:
ဘဝဆိုတာ ရှည်လျားတဲ့ ခရီးလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီလမ်းပေါ်မှာ ဖြောင့်ဖြူးတဲ့ လမ်းရှိသလို၊ ကွေးကောက်တဲ့ လမ်းလည်းရှိတယ်။ ပန်းတွေနဲ့ဝေတဲ့ လမ်းရှိသလို၊ ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ပြည့်တဲ့ လမ်းလည်းရှိတယ်။ ဒီလမ်းခရီးပေါ်မှာ လူတိုင်း လူတိုင်း အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဒုက္ခတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံအံတုရင်ဆိုင်ဖို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားရင် ချိုင့်ဝှမ်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ပစ်လိုက်ပါ။ လဲကျသွားခဲ့ရင် ဘယ်သူ့အကူမှမယူဘဲ ထရပ်ပါ။ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ဘယ်သူ့ဆီမှ အလျော်အစား ပြန်မတောင်းပါနဲ့.....
ကျရှုံးတယ် ဆိုတာ တစ်ခြားလူထက် ညံ့လို့မဟုတ်ဘူး။
ကျရှုံးတယ် ဆိုတိုင်း သင်မအောင်မြင်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။
ကျရှုံးတယ် ဆိုတာ လူ့ဘဝရဲ့ ဆုံးမှတ်မဟုတ်ဘူး။
လူ့ဘဝဆိုတာ ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ ကျောက်ဆောင်၊ ကျောက်စွန်းတွေမရှိခဲ့ရင် လှပတဲ့ရေလှိုင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျရှုံးခဲ့ရင် အဲဒီကျရှုံးခဲ့တာကို အင်အားအဖြစ် ပြောင်းပစ်ရမယ်။ နုပျိုတက်ကြွတဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ရင်ခွင်ဟာ မပြောပလောက်တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို သွားဂရုစိုက်နေစရာ မလိုဘူး....
ဘဝမှာ သင့်ကိုမျက်ရည်ကျစေတဲ့ အကြောင်းပြချက် အကြိမ်တစ်ထောင်ရှိခဲ့ရင် သင်ကလည်း အကြောင်းပြချက် အကြိမ်တစ်သောင်းနဲ့ ရယ်မောတတ်ရမယ်
မိုးသက်လေပြင်းကျနေပါစေ အောင်မြင်ခြင်းဆီသွားတဲ့ ခြေလှမ်းဟာ ဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုတ်ဘူး" ဒါမှ တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုရတယ်။
လမ်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခြေဖဝါးအောက်မှာပါ။ အတိတ်မှာ မှောင်မှိတ်တဲ့လမ်းတွေ ဖြတ်ခဲ့ဖူးပါစေ၊ အနာဂတ်မှာ လင်းလက်တဲ့လမ်းတွေ စောင့်မျှော်နေပါစေ..... အတိတ်ကို ယခုလက်ရှိရဲ့ဆုံးမှတ်လို့ သဘောထားပြီး အနာဂတ်ကို ယခုလက်ရှိရဲ့စမှတ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ။
ကျရှုံးတာဟာ ကြောက်ဖို့ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပျံသန်းရတယ်။ လေဒဏ်မိုးဒဏ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ခံကြရတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပျံသန်းရတယ်။ နွေးထွေးတဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့ လေပြေလေညင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ခံကြရတယ်။ ပျံသန်းစဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြံ့ခိုင်တဲ့အတောင်ပံတွေက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကောင်း ရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဝေးကို ကျွန်တော်တို့ ပျံသန်းရတယ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့အချိန်ဟာ တဟုန်းဟုန်း တောက်နေတဲ့ မီးတောက်နဲ့တူတယ်၊ ရဲရဲနီနေတဲ့ နေလုံးကြီးနဲ့တူတယ်.... လှပတဲ့အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲဖို့၊ တကယ့်လူ့ဘဝကို အရသာခံဖို့၊ ဘဝရဲ့ပျော်စရာတွေကို သီကုံးရေးသားဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ခွန်အားဖြည့်ခဲ့တယ်။
by Myanmar Medical Community on Saturday, January 22, 2011 at 10:21am
Posted by Ayeit Chit at 06:58 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 01:12 1 comment:
Posted by Ayeit Chit at 01:54 No comments:
ကျောင်းသားဟာ ဂျုံခင်းဆီသွားလိုက်တယ်။ ပထမဂျုံပင်တန်းထဲ သူဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ ဂျုံတစ်စေ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နေရာမှာ ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ ဂျုံတစ်စေ့ ရှိချင်ရှိနိုင်တယ်လို့ သူ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။
ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ သူဟာ အရင်အမှားမျိုးမလုပ်မိဖို့ ဂရုစိုက်တယ်။ စပါးခင်းအလယ် ရောက်တဲ့အခါ သူ့စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ အလယ်အလတ် စပါးစေ့တစ်စေ့ ခူးဆွတ်ရင်း ဆရာ့ဆီ ပြန်လာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းဆုံးအချစ်ကိုတွေ့ဖို့၊ အကောင်းဆုံး အချစ်ကိုရရှိဖို့ ရှာဖွေနေခဲ့ကြတယ်။
ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ အကောင်းဆုံးအချစ်ကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဒီထက်ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အချစ်ကို ဆက်လက်ပြီး ရှာဖွေနေကြတယ်။ နောင်တစ်ချိန်ရောက်မှ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းဆုံး အချစ်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိမြင်လာတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ရဲ့ဂုဏ၊်ပညာနဲ့သင့်တော်သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေကြပါတယ်။
အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် သင့်တော်သူတစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ လက်ထပ်လိုက်တော့တယ်။
ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေပြီး လက်ထပ်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေပြီး လက်ထပ်မှာလား။
ဘယ်လိုလူမျိုးကို လက်ထပ်သည့်ဖြစ်စေ၊ သူဟာ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ခံယူချက်နဲ့ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးမယ်ဆိုရင်တော့ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(Myanmar faCeb()()k Society :
Posted by Ayeit Chit at 18:52 No comments:
ဝိပဿနာ ပညာရှိသူသည် ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ကျငိ့၏။ ဝိပဿနာ ပညာမရှိသူသည်ခွေးကဲ့သို့ ကျင့်၏။ခွေးသည် ရန်သူက တုတ် ဓါး လက်နက်တို့ ဖြင့်ပစ်ခတ်သောအခါ အကြောင်းဖြစ်သော ရန်သူကို မကိုက်ဘဲ အကျိုးတရားဖြစ်သောတုတ် ဓါး လက်နက်တို့ကိုသာလိုက်ကိုက်၏။
ခြင်္သေ့မူကား အကျိုးတရားဖြစ်သော တုတ်ဓါး လက်နက်ကိုဂရုမစိုက်။ အကြောင်းတရားဖြစ်သောရန်သူကိုသာ ပြေးဝင်ကိုက်သတ်ပစ်လိုက်၏။ထို့ကြောင့်ရန်သူသည်နောက်တစ်ကြိမ်မလာနိုင်တော့ပေ။
ထို့အတူ မိမိကိုဆဲရေး စော်ကားသူရှိခဲ့သော် ထိုဆဲရေး စော်ကားသူသည် တုတ်ဓါး လက်နက်နှင့်တူသော အကျိုးတရားသာဖြစ်၏။မိမိသန္တာန်မှာဖြစ်ပေါ်သော ဒေါသ ကိလေသာကား အပါယ်ပို့မည့် အဓိက အကြောင်းတရားဖြစ်သည်။ပညာမဲ့သည် အကျိုးတရားဖြစ်သော ပညတ်ရန်သူကိုသာ လိုက်လံဖြေရှင်းနေသဖြင့် သံသရာမဆုံးနိုင်တော့ပေ။
ပညာရှိသည်ကားအကြောင်းတရားဖြစ်သော ဒေါသကိလေသာကိုသာဘာဝနာဖြင့်ပယ်သတ်လိုက် သောကြောင့်
ထို့ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသည်
Posted by Ayeit Chit at 23:40 No comments:
... run box တွင် prefetch ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ..
Posted by Ayeit Chit at 06:37 No comments:
လွှတ်တော်ဆိုတာက ဇွတ်ဆော်ဖို့ ပဲ စဉ်းစားနေကြတာဗျာ..
ပါတီဆိုတာကလဲ ဘာပလီရရင် ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာ ပါပဲ...
အဖွဲ့စည်းတွေက ဖဲ့တီးဖို့ နေရာရှာတယ်......
ရဲဆိုတာကလဲ ဆဲဆိုဖို့ ကလွဲပြီးဘာမှမသိသလို
စစ်တပ်က ပြစ်သက်ဖို့ ကလွဲပြီး ဘာဆိုဘာမှမသိ...။
ဘုန်းကြီက လုံးတီးနေရတောင် ကိုယ့်ဘက်ကရှိသလို
လူမျိုးရေးတွေကို အပူတစ်မျိုးတွေးပြီး...အယူဆိုး မွေးပေးသူတွေလဲ ရှိရဲ့ ..
အသာယာတွေးပြီ. သာယာရေးကိုသာ ဦးစားပေးရင်တော့ ကောင်းသပပေါ့ဗျာ...လို့ ဦးကျော်သူလို လူကတော့ ပြောချင်မှာပဲ...။
ပြောချင်ရင်လဲ ပြောဗျာ..ခဗျားကမှန်တော့ ပြည်သူဆိုတဲ့ကျနော်က လက်ခံတာပေါ့...။
ဘာသာရေးဇောင်းပေးလွန်းတယ်..လို့ တော့မပြောနဲ့ 
သူ့ အလုပ်သူလုပ်ပြီး..သူ့ စကားသူပြောလိမ့်မယ်..။
မုန်းသယောင်ယောင်နဲ့ ချစ်တယ်...လို့ ပြောတဲ့သူတော့ ရှိမှာပါပဲ..။
မိုက်တလုံးနဲ့ဘယ်သူကဗိုက်ဖုံးချင်ပါ့မလဲ..ရှင်...
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ မြန်မာဆိုတာ ဖားလေ...တဲ့...
ဒေါ်စန္ဒာမင်းကို မှားတယ်လို့ ဘယ်သူတွေ ပြောမလဲ....။
အိန်းအိန်းနဲ့ ချိုတူးဇော်ကို ဆဲတတ်ယုံနဲ့ 
ရသလို တက်ကြွပြီး အမှတ်မရမဲ့
သစ်ထူးလွင်မှာ ရစ်မူးချင်တိုင်းလဲ....နိုင်ငံရေးသမားလို့ မတွက်နဲ့ ..။
ဒါပေမဲ့ ဗလာအကြံနဲ့ မို့အနွှာခံလိုက်ရတာကများပါ့...
ဘာဖြစ်ဖြစ် မင်းလေးသာ အနားရှိ...ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ 
အရက်ပုလင်းကို အသက်သွင်းပြီး ချက်ချင်းကို ဆိုပြလိုက်ချင်တာက
အလွမ်းဘုရင် ရွှေနန်းသခင် ကိုနန်းရှင်ရေ..
ရစ်မူးပြီးတော့သာ အပြစ်မကျူးပါနဲ့ တော့...လို့ .......။
နန်းရှင် http://www.myshmm.com/ မှကူးယူပါသည်။
Posted by Ayeit Chit at 13:25 1 comment:
Posted by Ayeit Chit at 03:27 1 comment:
ဆိပ်ကွယ်ရာ အရပ်ဆိုတာ ရှိပေမယ့် စိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ဆိုတာကတော့ မရှိနုိုင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကို တိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်တဲ့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ ဘယ်သူမှ မသိနုိုင်ပါဘူးဆုိုပြီး လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ သူများက မသိနိုင်ပေမယ့် ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင်ကတော့ သိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူများရဲ့ မမြင်တိတ်ဆိပ်ကွယ်ရာဆုိုတာ ရှိပေမယ့် ကုိုယ့်စိတ်ရဲ့ မမြင်ကွယ်ရာဆုိုတာကတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကုိုယ့်ရဲ့စိတ်ကွယ်ရာကုို ဆိပ်ကွယ်ရာနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားလုို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် တိတ်ဆိပ်ပြီး မမြင်ကွယ်ရာမှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေလုို့ ဘယ်သူမှ မသိလောက်ပါ ဘူးဆုိုပြီး မဟုတ်တာတွေတော့ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ သူများမသိပေမယ့် ကုိုယ့်စိတ်ကတော့ကုိုယ်ဘာလုပ်တယ်ဆုိုတာ သိနေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ... ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို သိနေရဲ့သားနဲ့ သိသိကြီး ဇွတ်အတင်း လုပ်ဖြစ်ကြမယ်ဆုိုရင်တော့ အဲဒီအကျိုးဆက်က ကုိုယ့်ဆီကုို အခွင့်သာတာနဲ့ အကာအကွယ်မရှိ ရောက်လာမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 02:51 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 18:17 No comments:
တခြားသူတွေရဲ့အမှားကို ထောက်ပြ ရတာ လွယ်ကူတယ်
ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့သူကို နာကျင်စေရတာ လွယ်ကူတယ်
အမှားတွေ လုပ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတယ်
အမှားတွေက သင်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတယ်
တိုတိုထွာထွာ ဘာသာပြန် ။
Posted by Ayeit Chit at 17:03 No comments:
အစိန္တေယျ... အစိန္တေယျ အစနဲ့
Posted by Ayeit Chit at 08:41 No comments:
- ပျော်ရာမှာ မနေရပဲ တော်ရာမှာနေရတယ်
- မခွဲချင်ပေမယ့်ခွဲရတယ် မသွားချင်ပေမယ့်သွားရတယ်
- ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ ခရီးသွားတွေ
- လိုအပ်ချက်တွေရှိနေမှသာ ဘ၀လို့ခေါ်ရမလား
- မျက်ရည်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ တောင်တက်လမ်းတစ်ခု
ဘယ်လိုပဲ လို . . တ . . ရ ပေမယ့်
အနိစ္စ ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ ဆိုတာလေးကို နှလုံးသွင်းထားကြစေချင်တယ် ။
Posted by Ayeit Chit at 23:12 No comments:
ခြောက်ပြစ်မကင်းတဲ့ လူ့ ဘ၀မှာ
သံသရာကိုကျော်တက်ဖို့ဖြတ်လမ်းမရှိဘူး..
အဲဒီစိတ်ကလေး မလေလွင့်တဲ့နေ့ 
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ရုန်းရင်းရုန်းရင်း
Posted by Ayeit Chit at 00:38 No comments:
ကျွန်လို လုပ်နေရလို့လည်း အားမငယ်နဲ့၊ မိုးပျံနေအောင် ချမ်းသာနေလို့လည်း မာနတက် မနေနဲ့၊ သံသရာမှာ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို သဌေး၊ ပညာတတ်၊ ဘုရင်မင်းကြီးလည်း အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါပြီ။ ရတဲ့ဘဝမှာ အရိုးသားဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျိုးစားပြီး ရောင့်ရဲမှုတွေနဲ့ ရှင်သန်သွားရင် ဒီဘဝ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီး ဘဝဘဝ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်သွားမှာပါ။
Posted by Ayeit Chit at 20:02 No comments:
ငရဲမီးတွေကပဲ ငါ့အလွမ်းကို ငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တယ်..။
မှတ်ကျောက်အတင်မခံလိုက်ရတဲ့ ရူးသွပ်မှုကို နင်အားနာနေမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ...။
Posted by Ayeit Chit at 13:32 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 00:27 No comments:
၁၁။ သံသရာ အရှည် နှင့် ပုထုဇဉ် အရူး -
ခရီးက ရှည်၊ အရူးတွေ၊ စာရေ ( ရိက္ခာ )က သိုး၊ အဖော် ဆိုးသနင့်၊ အမျိုးမျိုး ကာမဂုဏ် အာရုံတွေ အလွန်နောက်တာကြောင့်၊ အပါယ်ဘုံ ခါခါ ရောက်သော်လည်း လွတ်မြောက်ဖို့ ဝေး။
(က) သံသရာ ခရီးက အလွန် ရှည်၏။
(ခ) ခရီးသွားသူတွေက အရူးအနှမ်းတွေသာ၊
(ဂ) သူတို့၏ ဂုဏ် ပကာသန ဒါန သီလ ဘာဝနာ စားနပ် ရိက္ခာသည် နိဗ္ဗာန် မရောက်ခင် ပုပ်သိုးလိမ့်မည်။
၁၃။ မွေးနေ့ ဆိုတာ အသက်ကြီးလာတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်တယ်၊
ငါသည် တနှစ်ပို၍ သေဖက် နီးလာပြီ လို့ ဆင်ခြင်ရမယ်၊ အောက်က လင်္ကာလေးကို မရသေးရင် ရအောင် ရွတ်ပြီး မရဏာ နုဿတိ ဘာဝနာဖြစ်အောင် ရွတ်ပါ၊
ငါနှင့် ရွယ်တူ ငါ့အောက်လူ ကြီးသူသေကြ များလှပြီ၊
ခဏမစဲ အိုစမြဲ၊ ကိုယ်လဲ သေဘက် နီးခဲ့ပြီ၊
မသေရမီ ပါရမီ ငါသည် ဖြည့်မှ သင့်တော့မည်၊
၁၄။ သီလ မကောင်းဘဲ ဘာဝနာကို တက်ဖို့ စိတ်မကူးနဲ့၊
သီလ မကောင်းရင် ဒါနတောင် မသန့်ရှင်းဘူး၊
သူများအထင် မသေးအောင် ဂုဏ်ရှိအောင် ပြုတဲ့ ဒါနဟာ အလွန်ညံ့တဲ့ ဒါနဖြစ်တယ်။
(တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒများ)
Posted by Ayeit Chit at 08:39 No comments:
ကျမနဲ့ ကိုနန်းရှင်တို့ ရဲ့ အိမ်ထောင်တခုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်စဉ်လေးပါ
အနူးညံ့ဆုံး မိန်းမကြမ်းတယောက်ရဲ့ ရင်ခွင်ဟာ
တနေ့ မှာရော်ရွက်ဝါတို့ ရဲ့ တမ်းချင်းကို
ဒါပေမဲ့.....မင်းနဲ့ ငါကန္တာရ ဆူးချုံတွေလိုကျင့်သုံးခဲ့ကြ။
ဒို့ ................ဂူတလုံးထဲမှာ အတူပုန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီပဲ။ ။
အဲ့ဒိအပိုဒ်မှာ ကောင်လေးကသူ့ချစ်သူကို အနူးညံ့ဆုံးမိန်းမကြမ်းလို့သုံးနှုန်းထားပါတယ်။ကောင်မ
လေးက ကောင်လေးထက်အနည်းငယ်အသက်ကြီးပါတယ်။ကောင်မလေးကကောင်လေးကို သဝန်
တိုပြီး ဟိုမသွားရဒီမသွားရ၊ဟိုလူနဲ့မပေါင်းရ ဒီလူနဲ့မပေါင်းရစသည်ဖြင့်အမြဲတန်းချုပ်ချယ်လေ့ရှိပါ
တယ်။ကောင်လေးကလည်း ဂျစ်ကန်ကန်ပေကပ်ကပ်ဆိုတော့ ပြဿနာတွေမကြာမကြာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒိပလ္လင်က ကျောက်ဖျာကြီးဆိုတော့ မာကျောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မြဆိုတော့ တန်ဖိုးကြီးမားတယ်၊
ဖြစ်သလို ရင်ခွင်မှာခိုဝင်သူကောင်လေးဟာလဲ အလိုလိုနေရင်းစွမ်းအားတွေတိုးပွားလာသလိုခံစား
ဖရုသဂီတဆန်ဆန် ၀ိုင်းဖွဲ့ သီဆိုကြလိမ့်မယ်။
ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးက ရုပ်ရည်အားဖြင့်လဲ အသင့်တင့်သာရှိကြသူတွေပါ။ချစ်ခြင်းအားဖြင့်လဲ
သားပဲလေ။သူတို့ဟာ မထင်မှတ်ပဲတဒင်္ဂအတွင်းမှာ တွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်သွားတယ်။ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေ့
တိုးဝင်သွားတဲ့လူဟာ အဆူးစူးခံရပါလိမ့်မယ်။ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဟာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ
ဒို့ ................ ဂူတလုံးထဲမှာ အတူပုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီပဲ။ ။
ဒါလေးကတော့ရှင်းပါတယ်။သူတို့ကြားကိုဝင်တဲ့သူဟာ ဒဏ်ရာအနာတရခံစားသွားရတာဟာ အခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သူတို့ဟာ တသက်စာလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကြားလူတွေရဲ့ပြောစကားတွေနားယောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားတင်ပြထားတာပါ။
Posted by Ayeit Chit at 18:32 No comments: